आखिर किन केटीलाई मात्र प्रश्न उठाइन्छ ? हेर्नुहोस् रोचक खबर – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/आखिर किन केटीलाई मात्र प्रश्न उठाइन्छ ? हेर्नुहोस् रोचक खबर
सुविन भट्टराईको चर्चित उपन्यास ‘समर लभ’बाट नेपाली चलचित्रमा भित्रिएकी नायिका हुन् रेवती क्षेत्री । उक्त चलचित्र खेल्नु भन्दा पहिला उनले बलिउडमा मोडलिङ गर्दै आएकी थिइन् भने उनले दर्जन भन्दा बढी भारतीय म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । रेवती २०१६ की मिस इन्टरनेशनल इंडिया पनि हुन् ।
पहिलो चलचित्रबाट उनको अभिनय र सुन्दरताको निकै प्रशंसा भए पनि त्यस पछि अर्को कुनै चलचित्रमा देखिएकी थिइनन् । रेवती पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेकी छन् । चलचित्रको एक दृश्यमा नायिका रेवती क्षेत्री बाथटपमा नुहाउँदै गरेको दृश्य सार्वजनिक भएको थियो भने उक्त दृश्यले उनको चर्चा परिचर्चा झन् चुलिएको थियो भने त्योसंगै उनी ट्रोलको शिकार पनि बनेकी थिइन् ।
यो चलचित्रको एक दृश्यमा नायिका रेवती क्षेत्री बाथटपमा नुहाउँदै गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ । कतिपयले यसलाई न्यू’ड दृश्यको भाषा समेत दिएका छन् । नायिका क्षेत्रीले भने यो कुरामा आपत्ती जनाएकी छिन् । उनले पत्रकारसँग भनिन् ‘एउटा नायकले सर्ट खोलेर अभिनय गर्दा नांगिएको नहुने । तर, एउटा यूवतीले बाथटपपमा नुहाएको दृश्य खिच्दा नांगिएको हुने ।
किन, सर्ट खोलेर अभिनय गर्ने केटामाथि प्रश्न उठाइदैन । किन केटीलाई मात्र प्रश्न उठाइन्छ । रेवती र चलचित्रका मुख्य नायक आशिष पियाको अन्तरंग दृश्य चलचित्रमा फिचरिङ गरिएको छ । उनले ‘न्यू’डिटी’ भनेको के हो भनेर प्रश्न गरिन् ? चलचित्रका नायक आशिष पियाले चलचित्रमा बेडसिन दिन सुरुमा केही असजिलो लागेतापनि पछि आफूलाई सहज भएको बताए ।
निर्देशकले सिकाउँदै गएपछि आफूलाई पछि यस्तो दृश्य गर्न सहज भएको उनले सुनाए । चलचित्रका मुख्य भूमिका निभाएकी नायिका रेवती र नम्रता सापकोटा निकै खुलेर काम गर्ने भएकाले पनि आफूलाई बेडसिनमा खासै गाह्रो नभएको उनले सुनाईन ।
बि’ल्कुलै बेवास्ता नगरी ए’कपटक तस्बिर छोएर , ॐ लेखी दर्शन गर्नुहोस् ७ दिन भित्र तपाईको भाग्य बद्लिनेछ
नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरै-पहिरो : गाडी नचलेपछि सडकमै खाना, सडकमै बिछ्यौना भिडियो रिपोर्ट
एयरहोस्टेजले विमान भित्रै यस्तो कार्य गरिरहेको भिडियो लिक भएपछि….हेर्नुहोस
कोरोनाको औसधी बारे भर्खरै नेपालमा पनि आयो यस्तो खुसिको खबर सबैले पदनै पर्ने कुरा